TTSweet: Singapore Universal Studio သို့ တစ်ခေါက် - (အပိုင်း -၁)
Posted by T T Sweet at 1:57 AM
မြတ်နိုး February 17, 2010 at 9:17 AM
အမ ပုံစံကတော့ အိုဆာကာ ယူနီဗာဆတီလမ်း နဲ့ အတူတူပဲ..အ၀င်လမ်းတွေ ကမ္ဘာလုံးတွေက ..ဒါနဲ့ ၃ဒီ အန်နီမေးရှင်းတွေကော မပြဘူးလား အဲ့အထဲမှာ..။ အဲဒါတွေက ရှူခင်းတွေထက်ပိုကောင်းတယ်။ ရိုရာကိုစတာအကြီးစားတို့ ဘာတို့ရော ရှိဘူးလားဟင်။
T T Sweet February 17, 2010 at 10:31 AM
3D အန်နီမေးရှင်းတော့ မတွေ့ခဲ့သေးဘူး။ ရှိူးပွဲတွေ တော်တော်များများက မပြသေးဘူးလေ။ တကယ် ဖွင့်တဲ့အချိန်ကျ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ရိုလာကိုစတာ အကြီးစား ရှိပါတယ်။ အပိုင်း (၂) မှ ဆက်တင်ပေးပါ့မယ်။
ဆောင်း February 17, 2010 at 1:58 PM
Universal Studio က ပုံစံအတိုင်း စလုံး ရော တခြားနိုင်ငံတွေက တထေရာတည်း ပုံတူလုပ်ထားပုံရတယ်။ ဟောလီးဝုဒ်ထဲမှာတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်ချင် ရင်ပိုက်ပိုက်ပေးရတယ်။
Sonata Cantata February 17, 2010 at 5:07 PM
လက်မှတ်ကို ဘယ်မှာ ဘယ်လို ၀ယ်ရတာ ဆိုတာကအစ ပြောပြပါ ဆွိတီရယ်
Regd. ထုံညီအမများ အဖွဲ့ခွဲ
PS. တဆယ်နဲ့ ရသေးတယ်ဆိုရင် တကယ် သွားမှာပါ
ကြော်အောင်ညာတဲ့ အန်တီဆွိက လက်မှတ်ဖိုးစိုက် ပါ
T T Sweet February 18, 2010 at 1:21 AM
မသီတာရေ ...လက်မှတ်ဝယ်ပေးတဲ့သူကို ဖုန်းဆက်မေးတာ ဖုန်းမကိုင်လို့ ပြန်တာ နောက်ကျသွားတယ် ... လက်မှတ်က ကုန်သွားပြီလို့ကြားပါတယ် အစ်မ။ သူလဲတိုးတိုးကျိတ်ကျိတ်တန်းစီပြီး ၀ယ်ခဲ့ရတာပါတဲ့။ အခုလို အစမ်းဖွင့်တာ တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ကနေ ၂၁ ထိပဲတဲ့။ တကယ်ဖွင့်တဲ့ခါမှ သွားပေါ့အစ်မ။
khin oo may February 18, 2010 at 2:09 AM
T T Sweet February 18, 2010 at 3:09 AM
အမောင်ရွာသား...လက်မ်ှတ်ဖိုးစိုက်ရရင်တော့ ... ဂစ် ... ဂစ် ... ဦးကပ်စီး တက်နည်း တက်လိမ့်မယ် ...
တစ်စောင် ၇၀ လောက်ရှိတယ်ပြောတယ် ... အစိမ်ဖွင့်ရင် ...
ဟုတ် အစ်မကွန်း ...ထုတ်ပါ့မယ် ... အလိုက်ပေးလဲပါ့မယ် ...း))
မြတ်နိုး February 18, 2010 at 10:53 PM
ဈေးကြီးတယ်အမ..ဒီမှာလဲ တယောက်ကို ၅၈၀၀ ယန်းပဲ။ ဒါပေမဲ့တခါတလေ ချတာက ကိုယ်ကဒီဘက်ခြမ်းမှာနေရင်၁၀၀၀ သက်သာတယ်။ ကျနော်ကတော့ အန်နီမေးရှင်းတွေ ကြိုက်တယ်။ အမတို့ပြောတဲ့ avature ထက်ပိုကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။ သူက ကွန်ဆက်ပြသလိုပြလို့..။
Moe Tain Nyo February 19, 2010 at 4:16 PM
အီဂျစ်ကိုတအားသွားလည်ချင်တာပဲ။ ပုံတွေတော်တော်ကို ကောင်းတယ်။ လင့်ထားလိုက်ဦးမယ်နော်။
ကိုလူထွေး February 21, 2010 at 10:26 PM
တီဆွိ လိုက်ပို့မယ်ဆို လာကြည့်ချင်ပါသေးတယ်...
ချစ်ကြည်အေး February 27, 2010 at 3:20 PM
ရွာသား...လူပဲစိုက်ရလို့ အကုန်အကျများနေအုံးမယ်...ဆွိရေ...မရောက်ဖူးသေးဘူးတော့် သွားအုံးမှာ...ကလေးတွေ လိုက်မစိုးလို့ တိတ်တိတ်လေး သွားမှာ...:)